हरेक प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्छु - तीन प्रश्न - साप्ताहिक
हरेक प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्छु
पुस २९, २०७२
- किसन सुनार, कलाकार
रामबजार, पोखराका स्थायी बासिन्दा किसन सुनार विगत तीन वर्षदेखि अभिनय क्षेत्रमा छन् । कलेजमा अध्ययरन छँदा एउटा लोकगीतको म्युजिक भिडियामा अभिनय गरेपछि उनले अभिनयमै करियर बनाउने लक्ष्य लिएका थिए । उक्त भिडियोमा आफू अलि कलिलै देखिएको प्रतिक्रिया आएपछि किसनले अभिनयको अनौपचारिक प्रशिक्षण लिन थाले । किसनले क्यामेराभन्दा पछाडि बसेर अभिनय कौशलको प्रशिक्षण लिने क्रममा केही वर्ष बिताए । त्यस क्रममा कोरियन, रसियन आदि भाषाका थुप्रै चलचित्र हेरे । विद्यालयमा छँदा केही नाटकमा अभिनय गरेका किसनले म्युजिक भिडियोपछि विज्ञापनमा समेत आफ्नो अभिनय कौशल देखाए । दुई वर्षअघि प्रदर्शन भएको चलचित्र ‘आगो–२’ मार्फत अभिनेताका रूपमा डेब्यु गरेका किसनले उक्त चलचित्रको भूमिकाबाट दर्शकमात्र होइन, चलचित्रकर्मीहरूको समेत मन जिते । सानो पर्दाबाट ठूलो पर्दामा फड्को मार्ने क्रममा किसनले प्रशस्त प्रशंसक कमाए । उक्त चलचित्रको छायांकन हेर्न पुगेका निर्देशक दशरथ गिरीको नजर किसनमा पर्‍यो । निर्देशक गिरीले किसनलाई चलचित्र ‘कैफियत’ मा अनुबन्ध गरे । यतिबेला चलचित्र ‘कैफियत’ प्रदर्शनको क्रममा छ जसमा किसनले सह–अभिनेताको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । झमककुमारी साहित्यिक प्रतिष्ठानले निर्माण गर्न लागेको चलचित्र ‘जीवन काँडा कि फूल’ मा समेत अनुबन्ध भैसकेका किसन यतिबेला झापामा एउटा नयाँ चलचित्रको छायांकनमा व्यस्त छन् । विगतमा किक बक्सिङका राम्रा खेलाडी किसनलाई दर्शकहरूले एक्सन अभिनेताका रूपमा समेत चिन्छन् । हरेक प्रकारका भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने किसनसँग साप्ताहिककाको तीन प्रश्न :
म्युजिक भिडियो, नाटक तथा चलचित्रमध्ये कुन विधामा बढी रमाउनुभएको छ ?
अभिनय गर्नुपर्ने हरेक विधामा म उत्तिकै रमाउँछु । विज्ञापनमा छोटो समयमा धेरै कुरा देखाउनुपर्छ । नाटकमा जीवन्त अभिनय गर्न पाइन्छ । चलचित्र लामो समय लगाएर बनाइन्छ तर जीवनभर रहन्छ । त्यसैले यी तीनवटै विधालाई म उत्तिकै सम्मान गर्छु ।
दर्शकले ‘एक्सन–हिरो’ भनेर प्रशंसा गर्दा कस्तो लाग्छ ?
चलचित्र ‘आगो–२’ हेरेका दर्शकले मलाई एक्सन–हिरो भन्नु स्वभाविक हो । वास्तवमा म हरेक प्रकारका भूमिका निर्वाह गर्न सक्छु । म आफूलाई कलाकारका रूपमा चिनिन पाउँदा खुसी लाग्छ ।
प्रदर्शनको तयारीमा रहेको चलचित्र ‘कैफियत’ मा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ ?
प्रारम्भमा म नकारात्मक भूमिकामा देखिन्छु । धनी बुवाको बिग्रिएको छोरा भए पनि कालान्तरमा मेरो चरित्रले सकारात्मक मोड लिन्छ । यो चलचित्रको प्रदर्शनपछि मलाई दर्शकले हरेक प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने कलाकारका रूपमा पाउनुहुनेछ ।
प्रकाशित :पुस २९, २०७२
हरेक समस्या अवसर बोकेर आउँछ
ह्याट्रिक गर्छु जस्तो लागेको थिएन
म प्रेमविवाह नै गर्छु
म दुब्लो हुनुमा हस्तमैथुनको कुनै भूमिका छ ?
हरेक प्रकारका गीत गाउनुपर्छ
मुख–मैथुनका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष के–के छन् ?
तीन प्रश्नबाट अरु
दिनमा तीनवटा भिडियो गर्दैछु श्रावण १७, २०७३
सुकुले दर्शकको मन जितेकी छिन् श्रावण १०, २०७३
समाजसेवामा पनि रुचि छ असार ६, २०७३
भिडियोमा प्रयोग गर्न रुचाउँछु जेष्ठ २६, २०७३
टेलिभिजनमा रमाएकी छु जेष्ठ १६, २०७३
रोमान्टिक भूमिकामा रमाउँछु जेष्ठ १३, २०७३
अनलाइनमा तत्कालै प्रतिक्रिया पाइन्छ वैशाख २३, २०७३
अझै पनि अभिनयमा सक्रिय वैशाख १५, २०७३
आवाजबाटै प्रशंसक कमाएको छु फाल्गुन २९, २०७२
प्रेमलाई रोमाञ्चक शैलीमा समेटेकी छु फाल्गुन १७, २०७२